That's so good, right?: Christmas onaStick
ခရစ်စမတ် ညနေခင်းလေးတစ်ခုက ကိုယ်ဘ၀မှာမမေ့နိုင်စရာပါပဲ။ မင်းအိမ်ကနေ တခြားလူတွေ ပြန်သွားလျင်ပြန်သွားခြင်း ခရစ်စမတ် လက်ဆောင်ကိုယ့်အတွက်ပေးထားတာကို ဖွင့်ကြည့်ခိုင်းခဲ့တာကလည်း အလန့်တကြား။ ကိုယ်က လက်ဆောင်ထုပ်ကို မဖွင့်ချင်သေး လို့ ဟိုအကြောင်းပြ သည်အကြောင်းပြ မဖွင့်ဘဲနေတာ မင်းစိတ်ဆိုးသွားသေးတယ်။ ကိုယ်က မင်းနှင့်အတူ ရှိနေရရင်၊ ပြီးတော့ မင်း မျက်နှာလေးကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ မြင်ခွင့်ရနေရင်ပဲ ပေးဖို့လက်ဆောင်မလိုဘူးဆိုတာ မင်းက သိပ်လက်မခံချင်ခဲ့ဘူး။
Christmas Eve Party လေးမင်းအခန်းမှာကျင်းပပြီးတဲ့အချိန် ရှင်းလင်းဖို့ နေသားတကျဖြစ်အောင် ကိုယ်ကူညီနေတုန်း အလေးအနက် တောင်းဆိုနေခဲ့တာ။ မီးဖိုချောင်ထဲသွားပြီးဖွင့်ကြည့်ဖို့ မင်းတွန်းလွှတ်နေတာက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းကြည့်စေချင်တာကိုး....။
မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ဘယ်သူမှမရှိတော့ ကိုယ့်ရင်ခုန်သံကို ကိုယ်ပြန်ကြားနေရသလိုပါပဲ။ မင်းက တခြားအခန်းမှာ ဖန်ခွက်အလွတ်တွေ၊ အစားအသောက်ထည့်ခဲ့တဲ့ ပန်းကန်ဟောင်းတွေ သိမ်းဆည်းနေတာ။ လက်ဆောင်ထုပ်က အရွယ်အစား အလယ်အလတ်ဆိုတော့ ဘာများပါလိမ့်ပေါ့နော်။ ကိုယ်ကတော့ မင်းအတွက် လက်ဆောင်ဆိုပြီး အကောင်အထည်ဖော်ပြဖို့ တစ်စုံတစ်ခု ဟုတ်တယ် တစ်စုံ တစ်ခုမပါလာခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မင်းလိုချင်နေတဲ့ အဖြေကလေးပါလာခဲ့တယ်။ အဲဒါလေးကို ပြောပြဖို့ မင်းလိုအင်ကိုဖြည့်ဖို့ ဘယ်ဘက် ရင်အုံထဲက အသဲနှလုံးက တဆတ်ဆတ်ခုန်လို့။
လက်ဆောင်ထုပ်ဖောက်ပြီးပြီးခြင်းမြင်ရတဲ့ ပစ္စည်းရောင်စုံလေးတွေကြောင့် ကိုယ်အရမ်းရယ်ချင်သွားခဲ့ရတာ။ မင်းရှိတဲ့အခန်းဘက်ကို အသံပြုလိုက်တော့လည်း မင်းရဲ့တုန့်ပြန်ဖြေဆိုတာကို မကြားရ။ ဘာဖြစ်လို့ဘာလိမ့်ဆိုပြီး မီးဖိုချောင်ထဲက ခပ်သွက်သွက်ခြေလှမ်း တွေနှင့် ကိုယ်မင်းဆီလာလိုက်ရတယ်။
တံခါးမကြီးကို အသာတွန်းပြီး အခန်းတွင်းလှမ်းဝင်လိုက်စဉ်မှာပဲ မင်းပေးတဲ့လက်ဆောင်ထုပ်ကို သတိရပြီး ပြုံးမိရသေးတယ်။
ဟင်.... ရင်ထဲ ထိတ်သွားတာပဲ အခန်းတစ်ခုလုံး မီးလင်းဖိုကလာတဲ့ မီးရောင်ကလွဲလို့ ဘာမှထွန်းမထားဘူးလေ။ မီးလင်းဖိုနှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ မွှေးပွကောဇောကြီး၊ ပြီးတော့ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကြီးက အရောင်တဖျက်ဖျက်။ ကော်ဇောကြီးကို ဖွဖွနင်းပြီး လျောက်လာတာ ကိုယ်ရင် တွေ ပိုပြီးခုန် သွေးတွေနွေးစေရော မင်းကိုမြင်ရတာ။ ကျစ်လစ်တောင့်တင်းလှတဲ့ မင်းတစ်ကိုယ်လုံး ခေါင်းမှာ Santa ဦးထုပ်တစ်လုံး၊ အနီရောင် ဖဲကြိုးကြီးတစ်ချောင်းကို မင်းတစ်ကိုယ်လုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့မှာ စည်းထားတာရယ်၊ ပြီးတော့ မင်းတင်ပါး ခပ်အိအိထဲမှာ Candy Cane ခပ်ကြီးကြီးတစ်ချောင်းမြှုပ်နေတာရယ် တွေပဲမြင်နေရတယ်။
'ဘာလုပ်နေတာလဲ...' ကိုယ်စိတ်လည်းရှုပ် အံ့အားသင့်ပြီး မင်းကိုမေးမြန်းဖြစ်ရပါပြီ။ 'မင်းဖင်ထဲ အဲဒါကြီးကိုဘာထည့်လုပ်နေတာလဲ'
'Christmas အတွက်မင်းဘာလိုချင်ခဲ့တယ်လို့ ငါ့ကိုပြောခဲ့တာ မှတ်မိသေးလား Alex?' မင်းကိုယ့်ဘက်လှည့်ပြီး ရီဝေေ၀ အကြည့်တွေနှင့် ပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်တာ မြင်ရသူမှာ ပိုမိုရင်ခုန်ရတယ် သိလား။
'မဟုတ်ဘူး....အဲဒါပြီးတော့...အဲဒါပြီးတော့ ငါလိုအပ်နေတာကိုလည်း ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အဖြေ မပေးခဲ့ဘူး မဟုတ်လား'
'အဲဒါ....အခုလို ခပ်မာမာ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုနှင့် အာသာဖြေနေချင်ခဲ့တာလို့ မင်းကိုပြောခဲ့သေးတယ် မဆီမဆိုင်'
'ကိုယ့်ကို စနောက်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလား သူရ' အရိပ်အယောင် မချိုမချဉ်ပြုံးပြီး မေးသမျှကိုဖြေတယ် မင်းကတော့။
'အခု ငါစနောက်နေတာ မဟုတ်တော့ဘူး။ မင်းလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ အဖြေအတွက် ဆွေးနွေးဖို့ လုပ်နေတာလေ'
'အတော်ဆိုးတဲ့ကောင်....' ငါနှာခေါင်းရှုံ့မိရုံကလွဲလို့ ဘာမှဆက်မပြောဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ ပြီးတော့ ကော်ဇောပေါ်လှဲလျောင်းနေတဲ့ မင်းခန္ဓာကိုယ် အနေအထားရယ်၊ ရီဝေေ၀ကြည့်နေတဲ့ မင်းမျက်လုံးတွေက ကိုယ့်ကို သွေးတွေဆူပွက်လာစေဖို့ ဆွဲဆောင်နိုင်ပါပေရဲ့။ တစောင်းမကျတကျ လှဲနေတဲ့ မင်းနံဘေးကို အသာဝင်လှဲ ကိုယ့်လက်နှင့် မင်းနံစောင်းကြွက်သားတွေ တင်ပါးတွေ ကို အရေပြားခြင်း ထိကပ်ရတဲ့ ဖီလင်၊ မင်းနှုတ်ခမ်းတွေ၊လျှာဖျားတွေနှင့် ဖြူဖြူဖွေးသွားတွေကို ထိခတ်ရတဲ့အခါ candy cane ရဲ့ ချိုမြမှု ဖီလင်တွေက သွေးကြောထဲ တစိမ့်စိမ့်ပါ။ မင်းလည်း ကိုယ့်ရဲ့ မွတ်သိပ်တဲ့ အနမ်းတွေကြားမှာ မိန့်မူးသံလေးတွေထွက်လာတာ candy အရသာတွေနှင့် ဖုံးလွှမ်း ထားတဲ့ ကိုယ့်လျှာဖျားက မင်းခရေပေါက်ကို ကလိစဉ်မှာတော့ အကျယ်ဆုံးပဲနော်။
၀တ်ထားတဲ့ အ၀တ်တွေကို ဆွဲချွတ်မင်းဘက်ကိုပြန်လှည့်ကာစေ့ထားတဲ့ မင်းပေါင်ကြားကို ကြည့်လိုက်တော့ အနီရောင်ဖဲကြိုးနှင့် bow တစ်ခုက မတ်နေတဲ့ ငပဲတ၀ိုက်ခပ်ရှုပ်ရှုပ်။ ဖဲကြိုးအစွန်းမှ ခေါင်းလောင်းသေးသေးလေး တစ်ခုချိတ်ထားတာမြင်ရတော့ ကိုယ့်မှာရယ်မော မိရသေးရဲ့။ ငပဲကိုချည်ထားတဲ့ bow ကို ကိုယ်သွားနှင့်ကိုက်ပြီးဖြေချလိုက်တော့ ခေါင်းလောင်းသံလေးမြည်ကာ ပြေသွားစဉ်မှာ မင်းငပဲ လဲ ကိုယ့်ရဲ့ပူနွေးတဲ့ အာခံတွင်းထဲရောက်ကရော။ မင်းရဲ့ညည်းတွားသံ ပါးစပ်က ထွက်လာသလို ခြေထောက်တွေက မွှေးပွကော်ဇောကို ကန်ကျောက်ကာ ကိုယ့်ဆံပင်တွေကို မင်းလက်ချောင်းတွေနှင့်ဖွတော့တာပဲ။ စိတ်ထဲက ခံစားမှုတွေ ဖီလင်တွေကို အပြင်းပြဆုံး မင်း ဖော်ပြရင်း ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ ခဏတာအချိန်ပေါ့။
မီးလင်းဖိုက မီးတောက်တွေကြောင့် လင်းပနေတဲ့ မင်းမျက်နှာကို ကိုယ်မော့ကြည့်လိုက်တော့ ပျော်ရွှင်နှစ်သိမ့်မိန့်မူးမှုကအပြည့်။ မင်း ရင်ဘတ်ပေါ်ချည်နှောင်ထားတာတွေ့ရတော့ အဲဒါတွေကိုဖြည် နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကိုက်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ် ရုတ်တရက်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဖာသာ အပေါ်ကိုရွေ့ မင်းရင်ဘတ်မှာ စည်းနှောင်ထားတဲ့ ဖဲကြိုးနီကို သွားနှင့်ဖယ်ရှား ခပ်မာမာဖြစ်စပြုနေတဲ့ နို့သီးခေါင်း လေးတွေကို ခပ်ဖွဖွကိုက်လိုက်မိတာပေါ့။ မင်းကလည်း ခြေထောက်နှစ်ဖက်နှင့် ကိုယ့်ခါးကို ချည်နှောင်လိုက်တာ မတ်ထောင်နေတဲ့ မင်း ငပဲက ချက်ကိုထိကရော။
နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လျှာနဲ့ကလိလိုက် ရင်အုံတွေကို ဖျစ်ညှစ်လိုက်လုပ်ပေးတာမှာ မင်းပခုံးတွေ တဆတ်ဆတ်ခါနေသလို မင်း တင်ပဆုံတွေကလည်း မွှေးပွကောဇောကြီးကို အပေါ်ကိုရွေ့သွားစေတယ်နော့။ မင်းငပဲကလည်း ကိုယ့်ဗိုက်ကြွက်သားတွေကို စည်း ချက်ကျကျ ပွတ်သပ်လို့။
'ဘာ....' ကိုယ်မင်းနို့သီးခေါင်းလေးတွေကို မျှဉ်းစုပ်နေရာကနေဖယ်ပြီး မင်းမျက်ဝန်းတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ ကျေနပ်မိန့်မူးမှုအပြည့်။ 'Christmas အတွက်' မသဲမကွဲ တိုးတိုးမင်းပြောတာ။
'..လက်တောင်အပြင် တခြားလက်ဆောင်ကို လိုချင်သေးတာ'
'တခြားလက်ဆောင်....အိုး...ဒါတွေ' ကိုယ်အခုမှပြန်တွေးမိတယ်။ ဒါကြောင့် မီးဖိုချောင်ထဲဖွင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ လက်ဆောင်ထုပ်ထဲက candy cane အရောင်တွေထဲ condoms တစ်ခုကိုလှမ်းယူလိုက်မိပြီပေါ့။
မီးလင်းဖိုရဲ့ မီးရောင်ကြောင့် အလင်းသဲ့သဲ့ လင်းနေတဲ့ အခန်းထဲ တဖျတ်ဖျတ်တောက်နေတဲ့ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကြီးဘေးက မွှေးပွ ကော်ဇောကြီးထဲ အ၀တ်မပါ လူသားနှစ်ယောက် လွန့်လူးကြတာပေါ့ကွာ ဟုတ်လား။မင်းပေးတဲ့ condom ကိုတဆတ်ဆတ် သွေးတိုးပြီး ပေါင်ခြံ ကြားမှာ ခုန်နေတဲ့ ကိုယ့်ညီဘွားကို စွပ်လိုက်တော့ မင်းခဏနေက အာသာဖြေထည့်ထားခဲ့တဲ့ candy cane ထက် ပိုထူပိုတုတ်တဲ့ candy ချောင်းကြီးက အသင့်ဖြစ်ပြီ။ မင်းတင်ပါးအကွဲကြောင်းတလျှောက် တဖတ်ဖတ်ရိုက်ရင်း ခရေပေါက်မှာ အသာတေ့ကာ ဖိသွင်း လိုက်တော့ ညည်းတွား လိုက်တဲ့ မင်းအသံရယ် သွေးကြောထဲတိုင်စိမ့်အောင်ကောင်းတဲ့ မင်းတင်ပါးတွေရဲ့အတွေ့ကြောင့် မင်းကိုပိုမို နှစ်သက်သွားပါတယ်။ အိုး...မင်းကို ခပ်မြန်မြန်ဆောင့်သွင်းရတာလောက် ကောင်းတဲ့အရသာမရှိခဲ့ဘူး တကယ်..။ နှစ်ဦးသား မျက်နှာ တွေလည်း အရသာထူး မှာပျော်မြူးနေကြတာပေါ့။
'ရှူး.....ရှူး...' နှုတ်ခမ်းမှာ လက်ညှိုးတင် မင်းကိုတိတ်တိတ်နေဖို့ အချက်ပြရတာက စကားပြောဖို့တောင်မလိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရှိအချိန်လေး ရနေလို့ပါ။ မင်းလည်တိုင် နုနုညံ့ညံ့မှာ ကိုယ်အနမ်းတွေချွေ၊ မင်းတင်ပါးတွေ ပေါင်တွင်းသားတွေကို လက်နဲ့ပွတ်သပ်ပေးနေရတာ ကြောင့်လည်း အပါအ၀င်ပေါ့။
'ကိုယ် စကားမဆိုခဲ့ဘူးနော်။ ခရစ်စမတ်အတွက် မင်းကိုပဲလိုအပ်ခဲ့တာပါ။ you are all of the Christmas that I needed'
'အဲဒီစကားထက် ချိုမြိန်တာရှိဦးမလားဟင်...' မင်းအိပ်မက်ထဲမှာ ကယောင်ကတမ်းပြောနေတဲ့ လေသံများလားထင်မိပါရဲ့။
'ငါသိနေတာကတော့ လောလောဆယ် မင်းအပြုအစုတွေက အရမ်းကောင်းနေတာ...ထပ်ပြီး...ထပ်ပြီး ပြင်းပြင်းလေးဆောင့်...ရှီး' မင်းလိုအင်တွေထဲ ကိုယ်မျောပါမှာပါ။ ကိုယ်မငြင်းနိုင်ပါဘူးလေ။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တို့နှစ်ဦး လိုအပ်ချက်၊ လိုအပ်နေမှုတွေက မတူညီကြသလိုပဲနော်။ ကိုယ်ရှက်ပြီးလက်တွန့်သွားရတယ်။
'ကိုယ်တောင်းပန် ပါတယ်၊ မင်းအတွက် ကိုယ့်လက်ဆောင်တစ်ခု မရှိခဲ့ဖူးဘူး'
ကိုယ့်စကားကြာတော့ မင်းရယ်သွမ်းသွေးတယ်။ 'မင်း...ငါ့အတွက် လက်ဆောင်အဖြစ် အကုန်ပေးနေပြီပဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ်'
ကိုယ်မင်းပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဖြဲ Candy Cane ကြီးကို အတွင်းကျအဆုံးထိသွင်းကာ မင်းလိုခင်နေတဲ့ လက်ဆောင်ကို ကော်ဇောကြီး ပိုမို တွန့်ခေါက် သွားတဲ့အထိပေးပစ်တာပေါ့ကွာ ဒီတော့လည်း။ မင်းခါးစပ်တ၀ိုက်မှာ ချည်နှောင်ထေားတဲ့ ဖဲကြိုးအစွန်းက ခေါင်းလောင်းသံ လေးက မင်းရယ်သံ၊ သက်ပြင်း ချသံနှင့် အော်ဟစ်ညည်းတွားသံတွေက ဟာမိုနီကိုဖြစ်လို့နော်။
Alex Aung (16-12-2010)
Note: ဘာသာပြန်ဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။ စာတွေရေးတဲ့ သက်တမ်းသိပ်မကြာသေးခင်ကရေးထားတာဆိုတော့ အမှားအယွင်းပါရင် သည်းခံပါလို့နော်။